3DS Max Training - VERTEX ANIMATION STUDIO
Autodesk 3Ds Max သင်တန်း
3D Studio Max Software ကို Computer အသုံးပြုတတ်သော မည်သူမဆို သင်ကြားနိုင်ပါသည်။
3D Studio Max software သည် 3D နှင့် ပတ်သက် သည့် အရာအားလုံးကို ပြုလုပ်နိုင်သော စွယ်စုံသုံး Software ကြီးတစ် ခုဖြစ် ပါသည်။3D Cartoon Animation များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင် ၊ ဗီဒီယို effect များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ TV ကြော်ငြာ များ ၊ Motion Graphic Title များအတွက် 3D animation ပြုလုပ် ခြင်း။ Game company များအတွက် Game Character နှင့် Animation များ ပြုလုပ်ခြင်း။ Architecture 3D Visualization များတွင် အသုံးပြု ခြင်း၊ Science Project များတွင် Simulation များပြုလုပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး အသုံးပြု ကြပါသည်။
ထို့အပြင် အခြား 3D software အားလုံးနှင့် အဆင်တပြေ ချိတ်ဆက် နိုင်သဖြင့် တခြား Popular 3D software အားလုံးနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ -- 3DS Max ဖြင့်ဆွဲထားသော 3D Character model ကို Maya သို့ပြောင်းလိုပါက အလွယ်တကူ send to Maya Menu ဖြင့် ပြန် save ပေးနိုင်သည်။)
3D Studio Max နှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိသဖြင့် 3D Studio Max ကိုတက်မြောက်ထားပါက 3D နှင့်ပတ်သက်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်များကို ပိုမိုရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ ​
3D Studio Max Course Outline​
Vertex Animation Studio တွင် 3Ds Max သင်တန်းတက်ရောက်ပါက အောက်ပါ topic များကို နည်းစနစ်တကျ တက်မြောက်စေရန် ဂရုစိုက် သင်ကြားပေးပါတယ်။
Texture creation in Photoshop​
6. Shaders and material creation in node base workflow
7. Character Rigging and Face animation
8. Character animation, walk cycle, editing with animation layers
9. Lighting and Render
10. Making environment
3DS Max ရဲ့ Poly modeling နည်းစနစ်မှာ အလွန် ပြည့်စုံပြီး အလုပ်မြန်မြန် ပြီးအောင် ပြုလုပ်နိုင်သော Tools များ ပါဝင်ပါတယ်။ 3DS Max ဖြင့် model အားလုံးနည်းပါးကို ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ Archi model များကိုလည်း
Zbrush ဖြင့်ဆွဲသော High Poly model များကို Animation, Game engine များတွင် သုံးရန် မဖြစ် မနေ ပြုလုပ်ရသော Retopology အတွက်လည်း အလွန် ကောင်းမွန်သော Tools များပါပါတယ်။​
Game model များအတွက် အလွန်အရေး ကြီးသော unwrap UVW နည်းစနစ်ကို လည်းစနစ် တကျ သင်ကြားပေးပါတယ်။ 3DS Max ဖြင့် unwrap ပြုလုပ်ရခက်ခဲသော Model များကို လျင်မြန်စွာ Unwrap ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး တခြားအသုံးပြု လိုသော software များ သို့လည်း Export ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3Ds Max Node Material editor ဖြင့် material များကို ပိုကောင်းပိုမြန်အောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
Subsatance material များ အသုံး ပြု ခြင်းကိုလည်းသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Archi Models များအတွက် Real world scale ဖြင့်Material ပြုလုပ်ကာ Library Save ပြုလုပ်နည်း ကိုလည်းသင်ကြားရ ပါမယ်။ အသုံး များသော Material များကို Library ပြုလုပ်ပြီးပါက မည်သည့် computer သို့မဆို ပြောင်းရွေ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။​
Unwrap Hard surface model
Character model unwrap interface
Character Animation များတွင်လည်း walk cycle ပြုလုပ်နည်း။ Animation Layer Editing, Editing motion capture Data တို့ကို သင်ကြား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
3Ds Max ၏ default Scanline Render system ဟာကောင်း မွန်ြ ပီး အခြား တန်းတူ software များနှင့် နိုင်းယှဉ်ပါက အလွန် မြန် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် computer အနည်းငယ်သာရှိပြီး project အစအဆုံး ပြုလုပ်လိုသော Freelance Artist များအ တွက် No.1 ရွေးရှယ် စရာ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
3Ds Max နှင့် Vray plug-in ကို အသုံးပြုပါက ရုပ်ရှင် များအ တွက် Realistic Render quality ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။